emulators ugu fiican PS3 ee Android | Forum Mobile
Eder Ferreno | 09/05/2022 12:00 | Ciyaaraha
Isticmaalayaal badan oo Android ah ayaa raba inay awoodaan inay ciyaaraan ciyaaraha ka dhufto ee kale ee telefoonada ama tablet-kaaga. Tani waa wax ay suurta galiyeen emulators, inkastoo Google uu xannibay joogitaanka qaar badan oo iyaga ka mid ah Play Store. Markaa way adag tahay in la isticmaalo. Wax in isticmaaleyaal badan ay raadinayaan waa PS3 emulators for Android.
Marka xigta waxaan kuugu dayn doonaa liiska qaar ka mid ah emulators ugu fiican ps3 ee android. Sidan, taleefankaaga Android ama tablet-kaaga waxaad awoodi doontaa inaad ku ciyaarto ciyaarahan console-ka Sony. Hab wanaagsan oo lagu galo koobabka qaarkood oo aanad si kale u ciyaari karin. Waxaan soo aruurinay barnaamijyo taxane ah oo aan hadda si bilaash ah ugala soo degsan karno Android, inkastoo intooda badan aysan ku jirin Play Store.
Doorashada nooca emulators ma aha kan ugu ballaaran, laakiin nasiib wanaag waxaan haysanaa doorashooyin aan ku soo dejisan karno Android. Dabcan, waa muhiim in la tixgeliyo shuruudaha uu mid kasta oo ka mid ah emulators-ku leeyahay. Maadaama ay waxoogaa doorsooma yihiin oo ay suurtogal tahay in uu jiro mid aan ka shaqaynayn qalabkaaga, maadaama ay mararka qaarkood ku waydiiyaan waxyaabo ay ka mid yihiin in ay haystaan ​​processor-ka octa-core, tusaale ahaan. Haddaba waxaa muhiim ah in aan tan maskaxda ku hayno, inkastoo aan ku xusi doono xaalad kasta shuruudaha ay qabaan, si aad u ogaato midka aad ku soo dejisan karto aaladdaada. Markaa waxaad awoodi doontaa inaad ku ciyaarto ciyaarahan PS3 taleefankaaga Android ama tablet-kaaga.
3 Emulator-ka PS3
Tani shaki la'aan waa mid ka mid ah emulators-yada ugu fiican PS3 ee Android. Sidoo kale waa emulator PS3 ah oo ka shaqeeya labada aaladaha Android iyo iOS, dad badan ayaa ka faa'iidaysan kara isticmaalkeeda. PS3Mobi waa codsi in muddo ah nala jiray laakiin ilaa maanta si fiican u shaqeeya. Waxay noo oggolaan doontaa inaan ku dayanno nooc kasta oo ciyaar ah, oo leh waafaqsanaanta sare ee cinwaannada lagu heli karo qaabka ISO. Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda.
Mid ka mid ah qodobbada xoogga leh ee emulator-kan ayaa ah in uu leeyahay server-ka halkaas oo aad ka soo dejisan karto ciyaaraha fiidiyowga adigoon marin boggaga internetka ee kala duwan. Nidaamku wuxuu noqonayaa mid aad u fudud oo ammaan ah taas mahaddeeda. PS3Mobi waxa kale oo ay leedahay interface fudud, kaas oo sahlaya in la isticmaalo, run ahaantii, interface-kan fudud waa shay caawin doona marka ay timaado in la awoodo in lagu ciyaaro dhammaan koobabka PS3 ee Android.
PS3Mobi waa mid ka mid ah emulators-yada PS3 ee loogu talagalay Android. Soodejinteeda hadda waxay ka badan tahay 15 milyan. Sida qaar badan oo idinka mid ah horeba u malayn kartaan, maaha emulator-ka aan ka soo dejisan karno Google Play Store. Waa inaan ka soo dejisannaa mareegta horumariyaha. App-ka uma baahna rakibaad weyn si uu u bilaabo ka shaqaynta taleefoonka dhexda. Isticmaalayaal badan oo Android ah ayaa awood u yeelan doona inay ka faa'iidaystaan ​​​​ku-dabaylahan.
emulator labaad ee liiskan waa doorasho cadaalad ah oo dhamaystiran oo sidoo kale caan ka ah dadka isticmaala. Waxay taageeri doontaa dhammaan noocyada ciyaaraha PS3, ilaa iyo inta ay ku jiraan qaabka ISO. Tani waa emulator ah in dhammaan isticmaalayaasha Android aysan awoodi doonin inay ku rakibaan shuruudaheeda. Maadaama ay qaadato ugu yaraan Processor-ka 8-core oo xawaarihiisu yahay saacada ka sareysa 1 GHz. Intaa waxaa dheer, waa inaad haysataa ugu yaraan 4 GB oo diyaar u ah wax walba inay si habsami leh u socdaan iyo awoodda xusuusta oo ku filan si aad u soo dejiso cinwaan qalabka laftiisa.
Heerka interface, waa emulator ah in ay fududahay in la isticmaalo. Waxay leedahay interface aad u fudud marka loo eego naqshadeynta, sidaa darteed isticmaale kasta oo Android ah wuxuu awoodi doonaa inuu ku wareego iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin. Maadaama aad kaliya u baahan tahay inaad furto ciyaarta su'aasha ah ee aad ka rabto tab ugu weyn ka dibna sug inta ay ku shubanayso. Markaa tani waxay noo ogolaanaysaa inaan awoodno inaan ku raaxaysanno ciyaaraha iyada oo aan la isku mashquulin. Faa'iidada kale ee emulator PS3 this.
Playstation Pro waxaa lagala soo bixi karaa website-ka horumariyaheeda, ee isku xirka bilowga. Sida kuwa kale ee liiskan ku jira, lama heli karo Play Store. Soo dejinta iyo rakibidda emulator-kan waa wax fudud, mana qaadan doonto waqti aad u badan. Markaa waxaad si degdeg ah u bilaabi kartaa inaad ku isticmaasho aaladda.
Mid ka mid ah emulators-yada ugu wanaagsan ee PS3 ee Android ee aan hadda haysanno waa kan. Dhab ahaantii, waa mid ka mid ah ugu dhamaystiran ee PS3 for Android in aan maanta heli karno. Waa codsi aan ku soo dejisan karno Android iyo iOS labadaba. Labada xaaladoodba, waxay leedahay xallin wanaagsan oo loogu talagalay qalabka labadan nidaam ee hawlgalka waxayna siin doontaa waxqabadka dareeraha mar kasta.
Si aad u isticmaasho emulator-kan, waxa aad u baahantahay in aad haysato talefan dhex dhexaad ah ama ka sareeya, oo wata processor 8-core ah iyo kaadhka garaafyada kaas oo awood u yeelan doona in uu ciyaaro mid ka mid ah koobabka console-ka ee Sony. Ka shaqeeya nooca Android 4.0 ama ka sareeya, sidaas darteed badidiina wax ku ool ah ayaa awoodi doona inaad isticmaasho. Ku rakibida emulator waa wax fudud oo degdeg ah. Intaa waxaa dheer, waxay awood u leedahay in ay furto noocyo kala duwan oo qaabab ah, oo ay ka mid yihiin, dabcan, waa qaabka ISO. Markaa ma jiri doonto wax dhibaato ah marka laga furo ciyaaraha.
App-kan loogu talagalay taleefannada waa nooc la beddelay oo la habeeyey ee nooca kombuyuutarrada. Tani waa wax sababi kara dhibaatooyin xagga iswaafajinta, laakiin guud ahaan waxaan awood u yeelan doonaa inaan ka ciyaarno inta badan koobabka PS3. emulator-kan waxa kale oo uu ina siinayaa xal ugu badnaan 720p. Emulator-ka PS3 waxaa laga soo dejisan karaa mareegta horumariyaha, sababtoo ah lagama heli karo Google Play.
Ha ku kadsoomin cinwaanka, sababtoo ah waxaan la macaamilnaa emulator kaas wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ciyaarto PSP iyo PS3 koobab qalabka Android. Intaa waxaa dheer, waa ikhtiyaar aan ku isticmaali karno ficil ahaan taleefan kasta oo leh nooca Android 4.0 ama ka sareeya. Ma aha midka shuruudaha ugu badan leh, markaa haddii aad leedahay meel dhexe ama wax ka fiican, xitaa dhowr sano ka hor, si fiican ayey u shaqeyn doontaa. Waa codsi miisaankiisu ka yar yahay 30 megabytes oo sida caadiga ah u shaqeeya si dhakhso ah, maadaama uusan isticmaalin kheyraad badan oo asal ahaan ku dayanaya 90% cinwaannada.
Emulators Tani waxay leedahay interface a classic in dhammaan emulators ay isticmaalaan iyo qaabeynta gacanta ee shaashadda laftiisa waa mid aan laga adkaan oo aad u fudud. Intaa waxaa dheer, waxaa horeyba u jiray qaabeynta caadiga ah ee la heli karo, haddii kale waxaan rabnaa inaan waxba ka qaban arrintan. Markaa mid kastaa wuxuu awood u yeelan doonaa inuu u habeeyo kontarooladan hab ku habboon iyaga.
PSP Emulator Pro waxaa laga heli karaa servero kala duwan. Sida xulashooyinka kale ee liiskan, maaha wax laga heli karo Google Play Store. APK-ka emulator-kan waa la rakibi karaa ilaa iyo inta aad ka shaqeysiiso codsiyada ilo aan la garanayn. Waa mid ka mid ah emulators-ka ugu badan ee la soo dejiyo, isagoo horey u dhaafiyay 20 milyan oo la soo dejistay adduunka oo dhan. Waxaad ku soo dejisan kartaa taleefankaaga Android laga soo xigtay.
Kuwan ugu dambeeya emulators-yada PS3 ee ugu wanaagsan Android Waa mid aan ka soo dejisan karno Play Store-ka, ugu yaraan hadda. Waa emulator-ka la soo dejisan karo mar hore noociisa hore waana mashruuc muddo dheer soconaya. Inkasta oo aysan weli ku jirin nuqulkeedii ugu dambeeyay, kaas oo la filayo dhowr bilood gudahood, emulator-kani wuxuu si fiican u shaqeeyaa qalabka Android. Intaa waxaa dheer, dad badan waxay faa'iido u tahay in laga heli karo Play Store.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waa in uu leeyahay taageero tiro badan oo kordhin, kuwaas oo ay ka mid yihiin: bin, .mdf, .pbp, .iso, .toc, .cbn, .m3u, zip, .img, .cue iyo 7z. Sidaa darteed, waa emulator oo loo isticmaali karo wax badan. Si aad u isticmaasho, waxaad u baahan doontaa inaad haysato qalab dhexdhexaad ah ama heer sare ah, maadaama ay tahay shay cuni doona kheyraad badan oo u baahan qadar go'an. Laakiin inta badan isticmaalayaasha nidaamka qalliinka waa inay awoodaan inay ku shaqeeyaan iyada oo aan dhib badan lahayn.
Sidoo kale, waad awoodi doontaa ciyaar ku saabsan 90% ee ciyaaraha PS3 ku emulator this. Markaa hubaal waxaad ka ciyaari doontaa ciyaaraha aad jeceshahay iyada oo aan dhibaato badan lahayn. Xasuusnoow in uusan ahayn nuqulkii ugu dambeeyay, sidaas darteed waxaa jira waxyaabo weli loo baahan yahay in lagu nadiifiyo. Iyadoo ay taasi jirto, waxqabadka ayaa wanaagsan oo heerka interface waxaad arki doontaa in ay aad u fududahay in la isticmaalo. Kani waa emulator-ka aan si bilaasha ah ugu soo dejisan karno Play Store-ka, kana soo degsan karno linkigan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » emulators-yada ugu fiican ee PS3 ee Android